Taliyaha Qaybta Booliska ee Gobolka Bari oo Sheegay Inay soo Qabteen Dad Lala Xiriirinayo Falal Amaan Dari ah. – Radio Daljir
Diseembar 11, 2011 12:00 b 0
Boosaaso, Dec, 11 -Taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari Gaashaanle Dhexe Cismaan Xasan Cawke (Afdalow)ayaa ka warbixiyay howlgalo lagu sugayo amaanka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada amaanka ee Puntland ay ka wadeen magaalada Boosaaso.
Taliye Cismaan Xasan Cawke (Afdalow) oo waraysi gaar ah siiyay idaacadda Daljir ayaa wxaaa uu sheegay ciidanku inay soo qabqabteen dad badan oo looga shakiyay inay falal amaan daro ah ay ka wadeen magaalada Boosaaso.
“Ciidanku waxaa ay soo qabqabteen dad looga shakiyay inay falal amaan daro ahi ay ka wadeen magaalada,waxaana dadkii lasoo qabtay qaarkood lagu helay dambiyo ay ka mid tahay inay katirsanaayeen Al-Shabaab ,kuwa kalena dambi ayaa lagu waayay oo waa la siidaayay”ayuu yiri taliye Cismaan Xasan Cawke (Afdalow).
Taliya ayaa waxaa uu dhinaca kale sheegay inuu wanaagsanyahay amaanka magaalada Boosaaso inkasta oo uu xusay in mararka qaar ay dhici karaan dil,dhac iyo wax la mid ah,waxaana uu intaasi raaciyay howlgalada ay ciidanku wadaan inuu socon doono inta amaanka si rasmi ah uu kasoo hagaagayo.
Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari Cismaan Xasan Cawke Afdalow ayaa ugu dambeyntii sheegay in looga baahanyahay shacabka magaalada Boosaaso inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay dowladda oo kaliya aysan ku filnaan karin in lasugo amaanka.
Hadalka taliyaha qaybta booiska ee gobolka Bari ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan magaalada Boosaaso lagu dilay ALLAH u naxariistee Dr Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimada dhinaca diinta ugu waawaynaa deegaanada Puntland iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya,waxaana dilkiisa ay dowladdu ku’eedaysay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab.
Odayaasha & waxgaradka degmada Taleex oo ku eedeeyey Somaliland shaqaaqadii shalay ka dhacday halkaasi.
Baahin: Sabti, Dec 10, Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. 2 gacan-ku-dhiigle oo dad ku laayey Puntland oo maanta qisaas lagu fuliyey; R/wasaare Gaas oo la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka-sida oo tababar u dhamaaday; Guddiga qiimayna masiibadii suuqa Bossaso oo kulan la yeehay wafti ka socda dawlada federaalka.